Downloads 1 614
Fa X-Plane 9
Mpanoratra: Denis Krupin
mifanaraka amin'ny X-Plane 9.22rc1 sy bebe kokoa.
Io no tranainy indrindra Rosiana seaplane ny toetra tsara, nalaina tahaka Atitany tanteraka ao 3D amin'ny HD textures, fomba amam-panao feo, textures CCCP Aeroflot, ary ny fihetsik'ireo sary mihetsika. Tena zava-misy sy azo antoka add-on.
To dismantle / vorio elatra mampiasa ny fitaovana efajoro ao amin'ny cockpit (tsy manao izany mandritra ny fiaramanidina, dia hianjera)
To mifamadika Rosiana / Anglisy gauges gazety "Shift + F1"
Hanafina mpanamory amin'ny fijery ivelany gazety "Shift + F2"
Raha manana olana amin'ny fampisehoana, dia mety miezaka ny hanova haben 2048x2048 rehetra textures ho 1024x1024
Shavrov Sh-2 dia 1930s sahona famolavolana sy ny sovietika voalohany faobe namoaka nanidina sambo. Ny kely, hazo fiaramanidina koa dia ny fampandrosoana ny Sh-1, tamin'ny maotera matanjaka kokoa sy mitombo habe.
Ny Sh-2 afaka mitondra tantsambo roa mpikambana ary koa ny mpandeha iray sy mandritra ny ririnina, ny fiaramanidina azo vonona amin'ny ski. Ny elatra ambany kely nanompo toy ny miraiki-po ho an'ny hiorina mitsingevana. Izany dia mazava, tsotra sy azo itokisana famolavolana.